Biodiversity Vision - XH
Umbono wethu wezinto ezahlukeneyo zenzululwazi ucacile:
⚫ qinisekisa iiyantlukwano
ngamanyathelo ekhonkrithi ...
Akwanelanga ukuthatha amanye amanyathelo okuziva ngathi yindalo ezincinci zemilambo okanye uyilo lomhlaba olunolunye usetyenziso oluncinci. Kufuneka sabele / sithengise umhlaba ukuze senze iipaseji eziluhlaza ukusuka kwindawo eziphantsi ukuya kwindawo ephezulu, ukusuka kumazantsi ukuya emantla - o.k.t. ukwenza lula ukufuduka kweentlobo zezilwanyana ebusweni bokudinwa okulwa notshintsho lwemozulu - njl.
⚫ esekwe kwisayensi
hayi ezopolitiko ...
Kufanele ukuba ibe ngumdlalo ophumeleleyo. Umhlaba ongaphezulu wabelwe kwindalo yasendle ukuze kuxhamle zonke iintlobo zezilwanyana kuquka nabantu.
Ukukhupha imali ngokusekwe kuthando lwezopolitiko okanye kwiiprojekthi esele zixhaswe ngemali okanye ezingacacanga zingenzeki.
Sele kucacile ukuba uninzi lwezenzululwazi luluvo lokuba asenzi ngokwaneleyo ukusindisa indalo. Nangona kunjalo abanakuba bonke bavumelana ngesicwangciso sokusebenza. Kuya kuba sengqiqweni ukubeka izibonelelo kwiintlobo ngeentlobo zeeprojekthi. Enye yezo projekthi kukwakha amachibi amancinci kunye neziqithi ukunika iintaka utshintsho ukuba zibuyele kwaye zizale.
Ayingombuzo wokuba ubonwe ukuba wenza into kodwa usindisa ngokwenene ezo zityalo kunye nezilwanyana.
⚫ kunye nokuzimisela
2% ye-GDP ...
Amanye amazwe anayo njenge njongo yawo yokuchitha iipesenti ezi-2 zeNgeniso yeSizwe (iMveliso yeKhaya ePheleleyo) kwezokhuseleko. Ukulwela indalo eyahlukeneyo yendalo akubalulekanga kangako. Sibanga i-2% ye-GDP yokuphuculwa nokukhusela izinto ezahlukeneyo zenzululwazi.
Asinakho ukulinda, ke ngoko icebo malibe ngokukhawuleza, endaweni yokunyusa kancinci inkcitho ngaphezulu kwenani le-x leminyaka.
Ukubala ukufikelela kule njongo iyi-2%, kufuneka ibe yiprojekthi eyamkelweyo kwaye hayi ngokusekwe kwezopolitiko, njengoko kuchaziwe apha ngasentla.
Nceda ucofe iintolo ezincinci ˅ ˄ apha ngasentla ngasekunene ukubonisa okanye ukufihla isicatshulwa esongezelelweyo ⬆️
Yabelana ngekhonkco lethu nomntu wonke www.biodiversity.vision